Nsogbu na-adịghị ala ala na ndị agadi dara | Ngwọta OMG
Ihe oriri na-edozi ahụ na okenye na-adaba
Ọtụtụ ndị edemede (Bonjour, Rapin et al., 1992; Delmi, Rapin et al., 1990) ekwuola na iri nri na ndị agadi nwere ike ime ka ọkpụkpụ nke mgbagwoju anya n'oge ọdịda. Ndị ọzọ, na-eji nyocha ahụ na nchọpụta ụlọ, achọpụtawo na ọ ga-adaba na ọdịda na ndị nwere ezi nri (Vellas, Conceicao et al., 1990). N'ime nnyocha e mere na Geneva (Rapin, Bruyère et al., 1985), a chọpụtara na n'ụlọ ọgwụ, "(ndị ọrịa nwere mgbajiri ụkwụ) nọ n'ọnọdụ nke na-esi n'erighị ihe na-edozi ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke okwu ndị ahụ, na-aga nke ọma n'ihu mgbawa (ọnwa 8) ". Ihe ndị na - adịghị edozi ahụ nwere ike iduga na sarcopenia * na mbelata nke arụmọrụ, nkwekọrịta na mmegharị, nke nwere ike ịnweta ohere ịdaba (Evans, 1995; Vellas, Baumgartner et al., 1992; Baumgartner, Koehler et al., 1998; Baumgartner, Mmiri et al., 1999; Bertière, 2002). Ozokwa, oke nkuku dị oke mkpa n'ihi na ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe nchebe, na - ebelata mmetụta nke ọkpụkpụ na - agbapụta n'oge ọdịda (Dutta na Hadley, 1995; Bertière, 2002). Ogologo elu ma ọ bụ uru bara uru n'oge ịghọ okenye nwere ike ịmepụta nchebe n'oge ọdịda, ma ndị inyom ma ndị ikom (Gordon na Huang, 1995). N'ụzọ dị iche, ọdịda nwere ike ime ka ndị na-erighị ihe na-edozi ahụ n'ihi na ha nwere ike itinye aka na mbelata aka, ọnwụ nke agụụ na ihe ize ndụ nke mkpa enyemaka maka iri nri.
Ahụhụ nke Micronutrient ga-apụta mgbe oriri caloric na-erughị 1,500 kcal kwa ụbọchị. Akwụsịghị na zinc (mkpa maka mmetụta nke uto), calcium, selenium (antioxidant) na vitamin (Ferry, Alix et al., 2002). Ọkpụkpụ bụ isi mmiri maka calcium na ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe ọkpụkpụ ọkpụkpụ ruo ogologo oge o kwere omume. A na-echekwa ọkwa calcium site na usoro usoro nke vitamin D na-arụ ọrụ dị mkpa (Cormier, 2002). Ọ bụrụ na calcium ma ọ bụ vitamin deficiencies dị, ahụ na-ejide calcemia na-efu nke ọkpụkpụ anụ ahụ. Ọkpụkpụ nwere ike isi otú a bụrụ nke na-emebi emebi, na-arịwanye elu nke ihe mgbawa (Cormier, 2002). Nakwa, a na-ejikọta adịghị ike vitamin D na adịghị ike ahụ ma daa (Janssen, Samson na Verhaar, 2002; Pfeifer, Begerow na Minne, 2002). Ọ bụ ezie na ọmụmụ dị ole na ole, o yikarịrị ka ọ ga-adọrọ mmasị na vitamin B12 n'ihi na ọ naghị enwe mmetụta na ọrịa vitamin B9 n'ihi na ọ na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ na-adịghị mma.
N'ọnọdụ ụfọdụ, erighị ihe na-edozi ahụ nwere ike ijikọta na ihe ndị ọzọ na-eduga n'ịdị ize ndụ nke ịdaba, karịsịa maka: - Ọrịa na-adịghị ala (lee "ọrịa ndị metụtara afọ", p. 45): ụda nke ọdịda dị elu karịa ndị mmadụ ọrịa ọ bụla na-adịghị ala ala n'ihi ezughị okè nke ha mepụtara (Gostynski, 1991). - Ọrịa na-arịa ọrịa: erighị ihe ndị na-edozi ahụ na ụkọ ihe na-arịakarị ọrịa na ọrịa Alzheimer na-arịwanye elu dị ka mmụba ọrịa (Rivière, Lauque et al., 1998). - Ịbelata ọrụ ahụ na-akpata n'ihi na ọrịa na-enwe mmetụta dị kpọmkwem na ọnyá nke ahụ ike na ihe ize ndụ metụtara ọdịda.
Mmanya na-aba n'anya na-abawanye uru nke B12 na B9 vitamin deficiencies, nke na-eme ka ohere ịdaba
E nwere ọtụtụ ihe kpatara nsogbu ndị na-edozi ahụ na ndị agadi. E wezụga ihe ndị na-esi n'ịka nká pụta n'echiche nke uto na ihe oriri na-edozi ahụ, enwere ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-ekwesịghị ileghara ya anya. Ndị a na-agụnye enweghị afọ ojuju na iri nri, ịda mbà n'obi, nsogbu ego, nsogbu ịzụ ahịa, ịhapụ onwe ya, wdg. Ọrịa buru ibu na-emetụta agụụ mgbe ị na-arịwanye ụkọ nri ma bụrụ otu ihe dị mkpa na-edozi ahụ. Mgbe a na-edozi ya, ọ bụ onye ọrịa meworo agadi ka ọ na-enwe ike ịmalite ịrịa ọrịa karịa onye ọrịa na-arịa ọrịa. Ọ ga - abụ ihe siri ike n 'oge dị mkpirikpi n'etiti ọrịa ọrịa na, ọrịa na - arịa ọrịa, a na - nke na-akpata nsị nke ahụ ike, ikekwe na-eduga n'inweghi oke na muscular reserve.
Aṅụ mmanya na-aba n'anya, nke pụtara na ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'oge dị mkpirikpi, na-abụkarị ihe dị iche iche na-adịghị agwụ agwụ, nke pụtara na ọ na-emegbu ya ogologo oge. N'ozuzu, ka mmanya na-aba n'anya na-abawanye, otú ahụkwa ka ihe nwere ike ịkpata nsogbu ahụike na ọdịmma mmadụ. Mmanya na-aba n'anya na-enye ihe ize ndụ ozugbo na ihe ize ndụ nke abụọ, a na-atụgharịghachi azụ na njikọta. Mgbochi na ọnwụ na-abawanye mgbe ịṅụ mmanya na-abawanye elu karịa ọrụ 21 kwa izu maka ụmụ nwoke (ọrụ 3 kwa ụbọchị maka ndị na-aṅụ mmanya kwa ụbọchị) ma ọ bụ 14 maka ndị inyom (ọrụ 2 kwa ụbọchị). A na-ewerekarị ikike dị elu karịa ọkwa ndị a dị ka mkparị. Ma maka ndị 65 na ndị ọzọ, a kwatuola ọnụ ụzọ ndị a n'ihi ụda nke oge ịṅụ mmanya na-aba n'anya. Maka otu a, ihe ize ndụ ahụike na-abawanye mgbe ịṅụ mmanya na-aba karịa ọrụ 7 kwa izu. Ndị ọkachamara na-ahụ maka nchebe okporo ụzọ na ahụike na ihe ize ndụ metụtara mmanya na-aba n'anya, gụnyere ndị agadi (WHO, 2002). Otú ọ dị, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọmụmụ banyere isiokwu a, enweghi nghọtahie nke mmetụta mmanya na-abawanye na ndị agadi.
Nzuzo 11516 6 Echiche Taa